Bafundisa ngokuphatha imali nobungozi bezikweletu | Isolezwe
Bafundisa ngokuphatha imali nobungozi bezikweletu
intandokazi / 28 February 2019, 1:42pm / BONISWA MOHALE
UNKK Rhoda Mthembu noNkk Octavia Hlatshwayo bafuna ukufundisa abantu ukuthi baphathe kahle imali
AKAFUNI ukubona noyedwa wesifazane ecwila ezikweletini uNkk Rhoda Mthembu onenkampani engayenzi inzuzo efundisa abantu ngolwazi lwemali.
Ukubona abantu bengena ohlelweni lwabacwile ezikweletini yize zikhona ezinye izindlela zokwehlisa izikweletu kuphoqe uNkk Mthembu ukuthi asungule iConsumer Financial Education Foundation ngoJuni ka2017.
UNkk Mthembu ubambisene noNkk Octavia Hlatshwayo kwiConsumer Financial Education Foundation kanti bashiya imisebenzi yabo ezinkampanini ezinkulu ukuze basize umphakathi ngolwazi lwemali.
Uveze ukuthi ngo-2007 ngesikhathi eneminyaka ewu-30 wayenemizi eyisithupha nezimoto ezimbili kodwa kwathi ngo-2009 wacishe walahlekelwa yikho konke.
“Nganikwa amasamanisi azo zonke izikweletu zami, ngathathelwa imizi embalwa nemoto eyodwa. Esikhundleni sokuthi ngiziyekelele ngakhetha ukushintsha impilo yami ngehlisa izinga engangiphila kulo. Ngaze ngahlukanisa nomuntu engangizwana naye ngoba wayengangiseki,” kusho uNkk Mthembu.
Uthe okwamsiza wukuthi wayesebenza kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama engumqondisi wezihlelo ezehlukene zezinkampani ezizimele.
“Abantu kufanele baphile ngokungangamandla abo, bangabi nezindleko eziphezu kwemali yabo. Sizohambela izindawo ezehlukene sifundisa abantu ngokuphatha imali nangamalungelo abo njengabathengi. Akufanele abantu basheshe bangene ohlelweni olusiza abacwile ezikweletini ngoba ziningi izindlela zokuphuma obishini lwezikweletu,” kuqhuba uNkk Mthembu.
Njengoba uMashi kuyinyanga yabathengi uNkk Mthembu nozakwabo kwiConsumer Education Foundation bazobonakala ezithangamini ezifundisa abathengi ngamalungelo abo, ezinye zizobe zilapha KwaZulu-Natal.
Uthe bahlela ukuba nochungechunge lwezithangani zokufundisa abathengi ngokuphathwa kwemali ezizoba esifundazweni kusukela ngo-Ephreli uma kuwukuthi bayaluthola uxhaso lwemali.
“Sifuna ukufundisa abantu ukuphatha kahle imali, amalungelo abo njengabathengi nokuthi uma kwenzekile bacwila kakhulu ezikweletini yimiphi iminyango okufanele bangqongqoze kuyo. Sizohambela emalokishini aseThekwini, siye koNseleni, Newcastle, Ulundi nezinye izindawo.”
Phakathi kwezingqinamba ahlangabezana nazo ubalule ukungabikhona koxhaso oluzosiza izinhlangano ezisiza umphakathi ukuthi zenze umsebenzi wazo.
UNkk Mthembu unesipiliyoni seminyaka ewu-20 emkhakheni wokuphatha imali nezinhlelo ezehlukene.
Ucele abantu ukuthi bayiphathe kahle imali ikakhulukazi abesifazane abavamise ukuthenga izinto ezingenasidingo.
“Abantu besifazane kufanele bakhumbule ukuthi bayizimenenja emakhaya abo ngakho mababe nohlelo lokusebenzisa imali. Baxoxe nemindeni yabo ukuthi malini ekhona, imalini abazokwazi ukuyisebenzisa. Akufanele uma kukhona isihlobo esidinga imali umuntu ajahe ukusisiza engalubhekanga uhlelo lwakhe lwezimali.”
Uthe uyakuqonda ukuthi abesifazane bayakuthanda ukusiza imindeni yabo nezihlobo kodwa lokhu akufanele kubafake ezikweletini.
“Uma amalungu akho omndeni efuna imali ethile noma impahla obungayihlelelanga kwisabelomali sakho, kufanele uwachazele ukuthi awunayo. Ungasabi ukuwabekela obala imali oba nayo nyanga zonke nezidingo zakho. Lokhu kuzokwenza aqonde isimo sakho uma uwachazela ukuthi awunayo imali. Ungalokothi uthengele izingane imfashini ehamba phambili ube ungenamali, phila ngokwamandla akho.”
Ucele abesifazane ukuthi bayeke ukuthi uma benemihlangano yezitokofela bathenge ukudla akade bengakuhlelelanga.